It is me. Ko Niknayman.: စင်ကာပူမှ မျိုးချစ်မြန်မာများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် Overseas Burmese Patriots (OBP) တို့မေးမြန်း ဖြေကြားချက်များ (ဒုတိယပိုင်း)။
၁။ သန်းရွှေအမိန့်ပေးလို့ ဘုန်းကြီးတွေကို ပစ်ခတ်ရိုက်နှက်တဲ့ စစ်သားတွေမှာ အပြစ်ထိုက် ပါသလား။ ထိုက်ခဲ့ရင် သာသနာအရ ဘယ်လို အပြစ်မျိုးပါလဲ။
Posted by Ko Niknayman at 8:52 AM